मिरांडा गद्दासको असहयोग
मिरांडा 18 तारिख 1988 मा ओरेगन शहरमा जन्मिए। उनले गार्डनर मिडिल स्कूलमा भाग लिइन् र एक दिनको मोडेल बन्ने सपना देखाए। मिराडा एक नृत्य टोली भएको थियो र साथीहरु द्वारा बहिर्गमन, मजेदार, र धेरै मायालु रूपमा वर्णन गरिएको थियो।
1 995मा मिरांडाको प्राकृतिक पिताले दुरुपयोगको दोषी पाए र जेल पठाइयो। उनको आमाको प्रेमीले पछि मिरांडाको दुर्व्यवहार गरे र सजाय गरी जेल सजाय भयो। दुर्व्यवहारको कारण उनले पादरी घरमा छोटो समय बिताए।
उनको कठिनाइको बावजूद, मिरांडाले राम्रो सन्तुलित भए र तिनको परिवारको आनन्द उठाए, जसमा तिनको जेठा बहिनी मरिस, सानो बहिनी मरियाहिया र साना भाइ जेसन पनि समावेश थिए।
यो आश्चर्यजनक छैन कि एशले आशा र मिरांडा गद्दा साथीहरू थिए। तिनीहरू स्कूलमा एउटै नृत्य टोलीमा थिए, एउटै घर निर्माणमा बसिन्, र एकअर्का सँगसँगै जस्तो। उनीहरूले समान समान भागहरू पनि सहभागी गरे जुन यौन सम्बन्धमा युवा बालिकाको रूपमा दुर्व्यवहार गरेका थिए।
एशले र मिरांडामा बस्दा अपार्टमेन्ट परिसर 1 990को दशकको अन्तमा निर्माण गरिएको थियो। यसले एकल मातृ र कम आय आयोजक परिवार र साथ नै मानसिक बीमार को लागि सस्ती आवास प्रदान गर्यो। यसको उच्च अधिवेशनको दर थियो र बच्चाहरु भरिएको थियो। परिवार आउन र जान्छ, र बच्चाहरु लाई छिटो नयाँ निवासीहरु संग साथीहरु लाई बनाउन सिक्न सिक्यो। यो परिसर को किनारा नजिकै थियो, जहाँ वार्ड वेभर र उनको परिवारले घर भाडामा लिएको निर्णय गरे।
बुवाहरू एशले र मिरांडाको उमेर नजिक एक जवान छोरी थिए, र तीन साथी बन्नु भन्दा लामो थियो।
एशले र मिरांडाले आफ्नो नयाँ साथीको घरमा समय बिताए, कहिलेकाहीँ रातभरै थोरै पार्टीहरूमा बसिरहेका थिए। मिशेल, एशलेको विपरीत, विस्तारित समयको लागि भवर घरमा बस्ने छैन। उनको अन्य चासो र साथीहरू थिए जुन अन्य गतिविधिहरूमा व्यस्त रह्यो।
9 9, 2002 मा, एशले स्कूलको बाटोमा गायब भयो।
प्रहरीले मिरांडा र एशलेका अन्य साथीहरूको साथमा साक्षात्कार गरे। को रूपमा जानकारी फिल्टर गरियो, अधिकारियों को संदेह गर्न थाले कि वार्ड वेवर उनको लापता मा शामिल थियो, तर कुनै गिरफ्तार गरेन। मिर्योले आफ्नो मित्रको अनुसन्धानमा धेरै संलग्न थिए, पुलिसले व्यक्तिगत जानकारी प्रदान गरेको थियो कि एशले उनको साथ साझेदारी गरेको थियो।
मिरांडा समस्यालाई थाहा थियो कि एशले भभर घरको विस्तारित अवशेषको समयमा अनुभव गरेको थियो। एशले उनको बिरुद्ध बिरोध गरे कि वार्ड वेभर हिंसामा परेको थियो र क्यालिफोर्नियामा छुट्टीमा उनको बलात्कृत भयो। मिरांडा, जो आफ्नो राय संग डरलाग्दो थिएन, साथीहरुलाई चेतावनी दिए कि वेवरको घरबाट बसिन किनकि उनी वर्ल्ड वेभर खतरनाक थिए। केहि सैद्धान्तिक रूपमा वेभरले मिरालाई दोषी ठहराएकी थिईनकी छोरीलाई स्कूलमा अस्ट्रास्कृत गरे, र उनीहरूले जहाँ बस्छन्।
दुई महिना पछि गए, र एशले पाउन्ड अझै हराएको थियो। मिरांडाका लागि जीवन सामान्यमा फर्किने सुरु भयो। 8 मार्च, 2002 मा, दिन मिरानेरको घरमा धेरै स्कूलको दिन जस्तै बित्यो। उनको आमा, मिशेल, कामको लागि लगभग 7:30 बजे छोडिदिए। यो मिरांडा उनको सामान्य समय मा उनको बस स्टप मा जाने को लागी मानिन्छ, त्यो लगभग 8 बजे सम्म त्यो एक नै रास्ता चला्यो कि एशले दिन गायब गरे - विल वेवर को घर को नजदीक को नजिकै।
लगभग 1:20 बजे, मिशेल गद्दासले आफ्नो सबैभन्दा पुरानो छोरीलाई एक कल प्राप्त गरे र उनलाई मिडिया स्कूलमा नपुगेका थिए र उनीहरु मध्ये कुनै पनि साथीले उनलाई सबै दिन देखेनन्। स्कूलले उनको डरलाई पुष्टि गर्यो, रिपोर्ट गर्नाले उनी सबैको कक्षामा अनुपस्थित थिए। मिशेल तत्काल पुलिस गए कि उनको छोरीको लापता थियो भनेर रिपोर्ट गर्न। अब दुई विफलताले हानेको छ, प्रहरी र एफबीआई मिरांडा गद्दास को खोज को आशा मा एक राउन्ड-घडी को जांच मा गए।
ओरेगन शहरका बासिन्दाहरूले डराएका थिए कि एक बच्चा अपहरणकर्ताले निर्णय गरेपछि उनको अर्को पीडा कस्तो हुनेछ। लापता केटीहरु को आमा मानिन्छ कि व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति, केटीहरु को जान्दछन्। प्रहरीले यस सिद्धान्तलाई पनि ध्यान दिए र अशले गायब हुँदा दुई महिना अघि साक्षात्कार गरेको उस्तै व्यक्तिहरूको प्रश्न फर्काए।
उनीहरूले केही जानकारी दिए, वार्ड वेभरलाई संकेत गरे, जस्तै एशले ताण्डको अवस्थामा, तर अझै पनि, कुनै गिरफ्तारी गरेन।
वार्ड वेभरको पुत्रको प्रेमिकाले बलात्कारको एक रोशनीले एशले पाउन्ड र मिरांडा गद्दास को पुलिस खोजीको अन्त्य ल्याएको थियो। महिला, आधा नग्न, वेवर घरबाट भाग्यो, चिन्ता गर्दै कि वार्ड वेवरले उसलाई बलात्कार गर्न खोज्यो। बुवाको छोराले पुलिसलाई फोन गरेपछि उनको बुबाले स्वीकार गरे कि तिनले एशले पाउण्डलाई मार्छन्। यी आरोपहरूले पुलिसलाई वार्ड भिभरको सम्पत्ति खोज्न अनुमति दिएको छ।
अगस्ट 24-25 को हप्ताको अन्त्यमा, एशले पाउण्ड र मिरांडा गद्दाको निकायहरु वार्ड भिभरको भाडा घरको सम्पत्तिमा भेटिए। एशलीको शरीर एक बैरल भित्र पत्ता लगाइएको थियो, एक छेदमा, कंक्रीट स्लैब अन्तर्गत जो कि उनलाई हराएको रिपोर्टको चाँडै दियो। मिर्योको अवस्थित एउटै सम्पत्तिमा बहाइएको पाइयो। एक ओटोप्सीले दुवै केटीको परिचय पुष्टि गर्यो।
वार्ड भवर गिरफ्तार गरिएको छ
4 अक्टोबर, 2002 मा वार्ड वेभर, एशले पाउन्ड, 12 र मिरांडा गडिस, 13 को हत्याका लागि दोषी ठहराइएको थियो। साथै, अन्य सम्बन्धमा एक असम्बन्धित मामला, जसमा यौन दुर्व्यवहार, बलात्कारको प्रयास, बढ्दो हत्या र दुरुपयोगको दुर्व्यवहार सहितको आरोप लगाएको थियो। , सबै जसलाई तिनले दोषी ठहराएनन्।
सेप्टेम्बर 22, 2004 मा, वार्ड वेवरले उनको दुई छोरीको साथीहरूलाई हत्या गर्न दोषी ठहराए पछि उनको शरीर आफ्नो सम्पत्तिमा लुकेको छ। उनी एशले पाण्डे र मिरांडा गद्दासका मृत्युका लागि दुई जीवन बिताएका थिए।
वार्ड वेभर एलएल: क्रूरताको जीवन
एशले पाउन्डको प्रोफाइल
म्यानन पारिवारिक हत्या विक्टोरियन डोनाल्ड "छोटो" शीबाको बदला
सेलिब्रिटी परीक्षण र न्यायालय केसहरु
चार्ल्स म्यानसन र टेट र ला बियानका मृतकहरू
जुलिसि ब्रिस्न: क्रेग्सलिस्ट किलरको बलिदान
ड्यूक विश्वविद्यालय लेक्रोस टीम रेप स्क्यान्डल
रिचर्ड कुक्लिन्स्कीको प्रोफाइल
ओएसज हिल्स मा हत्या र तबाही
निस्सन्देह सेडरको समयमा चार वटा प्रश्नहरू के हो?
R2-D2 क्यारेक्टर जीवनी र इतिहास
SUNY बफेल स्टेटस जीपीए, एसएट र ए ACT डेटा
शीर्ष3शार्क आक्रमण प्रजातिहरू
अमेरिकामा शीर्ष9हास्य-उपभोक्ता
रेड जम्प्सट्यूट उपकरण: जीवनी र प्रोफाइल
हवाई को डायनासोर र प्राग्राही संबंधी पशु
जर्मन भाषाको एक सरल संस्करण
चकलेट स्लिम पकाउनुहोस्
गिरफ्तार गरिएका विकासहरू: जेलमा समय बिताउने 12 गोलाकारहरू
स्मार्ट पार्टन आयन
मोली इविन्स उद्धरण
'उत्कृष्ट श्री फक्स' उद्धरण
कोन्ट एलिगियस को थियो (घोडाहरु को एक पेटेंट संत)?
जहर चेतावनी चेतावनी
मी या एम? पारंपरिक र मौलिकता बीचको भिन्नता
दक्षिणी काल्ट - दक्षिण सेन्टोनमियल परिसर
स्वचालित वाहन स्थान (AVL) प्रणाली कार्य कसरी
'80s को शीर्ष अस्पष्ट र भूमिगत संगीत कलाकार
शीर्ष 11 जनावर अधिकार अधिकारहरू
एम्मा वाटसनको भाषणमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शब्द मजाकियाको बारेमा थिए
अक्षर - नाम अर्थ र उत्पत्ति
जापानी उच्चारणमा कसरी सिल्लेन्स स्ट्राइबल गर्ने?
जोशू ट्री राष्ट्रिय पार्कमा रक चढाई